Yini i-digital signage hardware okufanele ngiyisebenzise? - Easy Multi Khombisa
1 Comment kokuthi Iyiphi ihadiwe yezimpawu zedijithali okufanele ngiyisebenzise?Posted in I-Digital Signage By ClemPosted on 25 / 05 / 2021 26 / 05 / 2021
Isikrini esisodwa kuzikrini ezintathu
Izikrini ezine kuya ezikrinini ezinhlanu
Ungazithenga kuphi izinto zakho?
Isoftware yezimpawu ezidijithali enamandla kakhulu
Isoftware eshibhe kakhulu yezimpawu zedijithali
Isoftware elula yezimpawu ezidijithali
Insizakalo yethu yamakhasimende izokusiza
Uma ufuna ukuqala emhlabeni omuhle wezimpawu zedijithali, kuzodingeka ube nokuqonda okuhle kokuthi hlobo luni idijithali yezimpawu zedijithali udinga, kepha siyazi ukuthi lokhu kungaba nzima kakhulu ukukhetha okuhle kakhulu. Ungakhathazeki, kule ndatshana, sizokusiza futhi uzokwazi ukukhetha okungcono kuwe nakwebhizinisi lakho!
Lapha, sizokuchazela ukuthi iyiphi i-hardware yezimpawu zedijithali okufanele uyisebenzisele yona Ukukhonjiswa Okulula. Ungalanda isoftware lapha.
Okokuqala, udinga ukukhetha ikhompiyutha ehambelana nesidingo sakho ngoba ukukhetha kwekhompyutha yakho kuzohluka ngokuya ngokuthi ufuna ukusebenzisa izikrini ezingaki. Ukukhetha ikhompyutha ehamba phambili unezinketho ezimbili:
Ungathenga ikhompyutha ekulungele ukuyisebenzisa, ngamanye amazwi, uthenga ikhompyutha yakho kuya ngokuthi ufuna ukwenzani;
Ungathenga izinto ezihlukile zekhompyutha bese uzifaka kwikhompyutha yakho. Ukuze wenze lokho, udinga ukuqonda kahle ukuthi ungakwenza kanjani, sincoma ukuthi uthenge ikhompyutha ekulungele ukuyisebenzisa.
Ngalokhu kulungiselelwa, ngeke ube nenkinga yokusebenzisa isoftware yethu izikrini esisodwa noma ezintathu, kepha uma ufuna ukusebenzisa izikrini ezingaphezu kwezintathu, kuzofanele uthuthukise ukusetha kwakho.
Ngale ndlela, i-Easy Multi Display izophinde isebenze nokucushwa kwakamuva kakhulu. Lesi yisibonelo nje.
I-RAM: 16 GB
Njengoba ungacabanga, uma ufuna ukusebenzisa izikrini ezine noma izikrini ezinhlanu, uzodinga ukumiswa okungcono. Le ingcono futhi ingaphatha kusuka ku- isikrini esisodwa kuya ezikrinini ezinhlanu.
I-RAM: 32 GB
Ngalokhu kulungiselelwa, ungasakaza kufika ezikrinini eziyisithupha ngasikhathi sinye. Lokhu ukusetha okuhle kakhulu ozokudinga!
Ukuze usebenzise ikhompyutha yakho ngezibonisi nesoftware, uzodinga izintambo eziningi ze-HDMI njengoba unezibonisi. Ungakhetha futhi uhlelo lwe-wi-fi, oluzokusindisa izintambo ze-HDMI.
Ungadinga futhi ikhadi lesibili lemidwebo uma elokuqala lingenawo amachweba we-HDMI anele. Bheka inani lamachweba we-HDMI ikhadi lakho lemifanekiso elinalo nomxhumanisi wekhompyutha ukugwema ukumangala okungathandeki.
Siphakamisa ukuthi uthenge izingxenye zekhompyutha yakho kufayela le- Iqanda elisha iwebhusayithi. Lapha ungathola zonke izingxenye esizikhulumile noma uthenge ngqo ikhompyutha. Uma udinga usizo lokukhetha izingxenye zakho noma iseluleko nje, unganqikazi Xhumana nathi.
Zonke izinhlobo zezikrini zizosebenza nge-Easy Multi Display, ngakho-ke ngokuthembeka, lapha siphakamisa ukuthi ukhethe isikrini esihle kakhulu esizolingana kahle nesitolo sakho. Isoftware yethu ikuvumela ukuthi uhlukanise isikrini ngasinye sibe izingxenye ezine kuze kube yilapho ungabonisa imithombo engama-24 ngasikhathi sinye uma unezikrini eziyisithupha.
Sinamakhasimende amaningi akhethe i- "Ibhizinisi"inguqulo esekela izikrini eziyisithupha futhi futhi inerimothi kodwa futhi ungakhetha eyethu"isikrini esisodwa"uma ufuna ukusakaza esikrinini esisodwa.
Ngezansi ungabona i-Easy Multi Display isebenza ngezikrini ezine nekhompyutha ye-gamer. Izithombe ezimbili zokuqala zisebenzisa imidiya eyodwa kusikrini ngasinye kanti isithombe sesithathu sisebenzisa umsebenzi wethu wodonga lwevidiyo.
Isibonisi sedijithali se-real estate
I-Uniqlo esitolo izimpawu zedijithali
Easy Multi Khombisa Videowall
Manje njengoba unehadiwe edingekayo, udinga isoftware enamandla kodwa engabizi kakhulu. Sifuna ukukunikeza isoftware yethu ye-Easy Multi Display ngezizathu eziningana:
Ingenye yesoftware yezimpawu ezinamandla kakhulu emakethe;
Futhi kungenye yezishibhile kakhulu emakethe (ekhokhwa kanye nangaphandle kokubhaliselwe);
Sikudalile futhi siyazi ukuthi uzokwaneliseka;
Sihlala sibuyekeza yona ukuze ihlale isesikhathini;
Kuyinto elula ukusebenzisa isignali yezimpawu ezidijithali emakethe;
Insizakalo yethu yamakhasimende ikusiza ekufakweni ukuze uyisebenzise.
Njengoba ukwazi ukubona, i-Easy Multi Display ingenye yezinto ezinhle kakhulu, ake sibone ngokuningiliziwe ukuthi kungani!
Sidumele ngamathuba amanye ama-software futhi besifuna ukunikeza amakhasimende ethu okungcono kakhulu, yileyondlela isoftware yethu eyazalwa ngayo. Ngenxa ye-Easy Multi Display, uzokwazi ukusakaza imithombo yezindaba efinyelela kuma-24 ezikrinini eziyi-6 ngasikhathi sinye, ungasebenzisa iVideowall yethu "ukuhlanganisa" izikrini zakho futhi usakaze ividiyo eyodwa ngokwesibonelo.
Uzokwazi ukufinyelela kweminye imisebenzi eminingi efana nomsebenzi we- "Multi Users" ukuze unikeze amalungelo amaningi noma amancane ngokusho kwabasebenzisi, ungasebenzisa futhi irimothi yethu ukushintsha isibonisi sakho ngokuchofoza okukodwa. Ungaphinda upheqa imiyalezo kwimidiya yakho noma uhlele ukubonisa kwakho kusengaphambili!
Vele, ungakhombisa izinhlobo eziningi zemidiya ezinjenge:
Izithombe (JPG, GIF, PNG ...);
Amavidiyo (MP4, AVI, MOV ...);
Imibhalo (PPT, DOCX, PDF ...);
Isoftware (Microsoft Words, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ...).
Iningi lenye isoftware izophakamisa ukuthi ukhokhe intengo yesoftware bese ukhokha okubhalisile okungabizi kakhulu ngokuya ngenani lezikrini zakho. Uzokwazi, lokho kungasheshe kubize wena nenkampani yakho.
Ku-Easy Multi Display sikunikeza amafomula amathathu aguqulelwe inkampani yakho futhi ikakhulukazi akukho okubhaliselwe!
I-Easy Multi Display kulula ukuyisebenzisa futhi ungahlela isoftware yethu ngezinyathelo ezintathu ezilula:
Khetha inani lezikrini onazo;
Hlukanisa izikrini zakho zibe izingxenye eziningana;
Khetha imidiya yakho.
Ungasebenzisa isoftware yethu!
Ithimba lethu lizokusiza kuyo yonke indlela ngokusebenzisa i-Easy Multi Display ukuze usebenzise kakhulu isoftware yethu!
Uma unezinkinga, ungalanda ifayela lethu le- umhlahlandlela womsebenzisi, vakashela i- FAQ. isigaba sewebhusayithi yethu noma uxhumane nathi ngqo ku- support@easy-multi-display.com ngosizo olwenziwe ngezifiso.
Ukucabanga okukodwa ku “Iyiphi i-hardware yezimpawu zedijithali okufanele ngiyisebenzise?"
Pingback: Yini imbobo yokubonisa? - I-Digital Signage ne-Video Wall Software